Noma yimuphi ukuphambuka endleleni evamile yokubalwa ngalokuyincenye (isimiso) ulawula iyunithi ezithile e ngokuphelele zonke mkhakha womsebenzi abantu kungaholela esimweni ngokuthi umuntu ongaphilile. iyunithi ngalinye ngeke ngokushesha azise iziphathimandla eziphakeme mayelana noshintsho kwezinkambiso yamukelwe inkambo imicimbi. Zonke izilinganiso futhi yiziphi izinyathelo okumele zithathwe uma izimo angajwayelekile, njengoba umthetho, bababonisa e imibhalo efanele esemthethweni. Kodwa ngenxa umehluko kwemikhakha womuntu umsebenzi isinyathelo uma kwenzeka ukwehluleka kohlelo futhi zizohluka.
Kunoma isiphi isenzakalo eyaletha imiphumela engemihle, ezithinta abantu abasebenza endaweni ethile, ukuze inhlangano ngokwayo, imishini ekhiqizwa umkhiqizo, imvelo (lokhu kuphakama isimo esiphuthumayo) inikeza ngezenzo ezithile ukuphuma kuso. Namuhla emkhakheni ubuchwepheshe bama-computer ochwepheshe ukusebenza kanzima ekudaleni futhi sithuthukisa izinhlelo ukuphathwa izimo ezinjalo.
Enkabeni yalo, lokhu umcimbi inhlekelele esibangela ukuhluleka okunzima lonke uhlelo, kungakhathaliseki profile yayo. Izizathu ukuthi kungase kube isimo esiphuthumayo, kunezinhlobo ezahlukene: kusukela inhlekelele engokwemvelo ukuze kulimaze imishini. Okuvela kuyo izenzakalo izici enjalo iyosithinta uhlamvu ezahlukene kuye ngokuthi umuntu futhi ngokuphelele ezimele, okuyinto okunzima ukubikezela futhi kunzima ukuthonya kubo.
Njalo ibhizinisi futhi ngokuvamile nganoma iyiphi uhlaka lwenhlangano kufanele abalingisa futhi wasebenza ejwayelekile kulomkhakha kuphakama isimo esiphuthumayo, nezimbangela zayo futhi uthathe zonke izinyathelo zokuqapha ukuvimbela okuvela kuyo ukwehluleka ohlelweni.
Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela ukuhlela okunjalo futhi umsebenzi kungaholela izingozi okukhulu, ukulahlekelwa ngokwezimali nje kuphela, kodwa futhi okwafa abantu. I ibhizinisi kumele babe nohlelo eziphuthumayo, ukulungisa izinhlelo ezilimele, nabasebenzi kudingeka uthole amakhono athile kanye neziqu.
Elinye iphuzu elibalulekile - noma kuvele isimo esiphuthumayo, abantu kufanele Ungethuki futhi kumelwe uyikhumbule ukuthi ukuphila kwabantu obuyigugu kakhulu.
Evamile, isimo ehola aphume Yiqiniso evamile imicimbi, ingahlukaniswa ngokuvumelana umthombo:
okulethwa izinhlekelele zemvelo kubangelwa, kwemvelo (ice, inkungu, njll ...);
okubangelwa izinguquko emgwaqweni futhi umgwaqo uxhumano (ukubhujiswa enamathela bawe on endleleni izinto zangaphandle, ukwakhiwa kanye ukukhanda umsebenzi ezihlobene endleleni ukuthi);
kubangelwa ukwahluleka imishini;
izingozi zibangelwa yomgwaqo, lokuthumela, zezindiza;
okubangelwa ngenxa ezibangelwe umuntu;
okubangelwa i-force majeure engakwazanga uvinjelwe noma kwakubikezelwe.
Yini eziphuthumayo izimo emsebenzini kungenzeka?
Eqinisweni, umbuzo olula. Iqiniso lokuthi umsebenzi wonke ehlukene, futhi ukhulume amacala evamile zokusebenza isigqi iziyaluyalu kudingeka ngqo umsebenzi ngamunye. Ayikho imiyalelo jikelele. Basuke, njengoba kushiwo ngenhla, kufanele akhiwa iziphathimandla ezifanele izinhlangano ezithile.
Kungenye into, isibonelo, isimo emoyeni uma gxuma parachute, elinye - ukufika eziphuthumayo indiza. Kunezimo ukwehluleka okungazelelwe izinhlelo ezenzakalelayo, tangcondvomshini, ukuhlaselwa hacker. Zonke lezi zimo ezihlukene.
Kukhona izingxabano esitolo, kukhona iziteleka kwabasebenzi enkampanini, futhi kukhona imibhikisho emikhulu. Izimo ezephula Yiqiniso kuhlelwe imicimbi, kakhulu. Zihluke futhi ezidinga ukucatshangwa ehlukile.
Lapho isimo kwenzeka inqubo ukusebenza kunoma iyiphi iphrojekthi adalwe iqembu ukulawula ukusebenza, ehlanganisa control abahlanganyeli. Iqembu kuhlanganisa abameleli zonke izindawo iphrojekthi.
Ngokuhamba kwesikhathi sakhe eSoviet Union isiphakamise imibuzo ebalulekile mayelana nokulungiselela amayunithi lonke lokufeza ukutakulwa ezimweni eziphuthumayo, uma isetshenziswa izikhali zembubhiso.
Ukubamba iqhaza eminyangweni ehlukahlukene, izimali kanye umzamo lapho kuvele eChernobyl nenhlekelele e waqinisekisa isidingo sokuqeqesha amabutho akhethekile lezakhamuzi ukuvela lolu hlobo izimo. Namuhla kunosongo olusha, okuzoxoxwa emhlabeni wonke - ubuphekula. Uyakwazi ukushintsha inkambo imicimbi ngasiphi ihora kunoma iyiphi indawo. Futhi namhlanje sifundiswa ukuba balungele Kulokhu kuguquka.
Eyingqayizivele uhlobo yayo, kuba nesimo esiphuthumayo emkhathini, lapho osomkhathi ngomqondo wedwa, futhi ngosizo Emhlabeni - ngumbuzo omkhulu. Ngokwesibonelo, ngo-March 18, 1965 Leonov Aleksey futhi Belyaev Pavel sibhekene nezikhathi Amazing angajwayelekile, okwakubonakala ngisho unsolvable.
Leonov wokuqala emhlabeni kwadingeka ukuphuma emkhathini. Lokhu uye wakwenza isinyathelo esinqala sokusho ngokucacile, kodwa yena nomngane wakhe kwadingeka kahlanu engozini. Uma kungenjalo ngokuqeqeshwa ngokwengqondo zezinkanyezi kanye nekhono baqikelele izinqumo zabo, mhlawumbe, konke eyayingase iqedwe kabuhlungu.
Ukuze uthole indlela yokuphuma Ezimweni eziphuthumayo, udinga ukuba amakhono athile. Kodwa-ke isici esibaluleke - kungcono ikhono enembile ukwenza ukukhetha okufanele. izinga okuphoqelekile kungumsebenzi.
I lokuyeka ukuthanda impilo
Isibonelo Cosmonauts Leonov futhi Belyaev ubonisa kahle ukuziphatha ukuthi udinga kunoma isiphi isimo, sebewuyekile control. Ngokumangalisayo, esinye ukuqeqeshwa yasemhlabeni Leonov yayiklinya ekamelweni, kodwa Ngohlelo Leonov, Belyaev is alidabukanga, futhi bobabili baphindela emkhathini.
Ukuthi nje okwamanje engene ngaphansi umthamo ebulalayo emisebeni yelanga ke Leonov cishe wahluleka ukubuyela ebhodini, spacesuit ballooned, le izazi zezinkanyezi nokwephula imiyalelo, kodwa ngakho wasinda izimpilo. Lo mkhumbi wathola umthamo-mpilo ngokweqile ngawo osomkhathi kanzima kakhulu, kodwa ephethwe. Futhi ekugcineni, "kwelanga" kwadingeka ukuba itshalwe ngesandla, nje kokuthi isistimu ezenzakalelayo wafingqa. Kwakubonakala konke kwaba ngokumelene nalo, kodwa izazi zezinkanyezi ephethwe, ngezinye izikhathi ngisho esebenza ngokulandela imiyalelo. Ngokusobala, isazela ukuphila sasinamandla. Plus ukuzinza ezingokwengqondo, isipiliyoni kanye nobuchwepheshe.
Ngingathola abakhulelwe emva ikhondomu?